Ngathi-i-Uk Prudential Industry Co., Ltd.
UK UKUFUNDISWA KUSHISHINO CO., LIMITED
Iqela laseMelika laseShishini lobuNgcono eliseWales, liqumrhu elidumileyo elinembali yeminyaka emininzi. Yinjongo yethu ukulandela izinto ezintsha nokuzilolonga. Iimveliso zethu zingasetyenziswa ngokubanzi kwizakhiwo zoluntu zasezidolophini, izakhiwo zorhwebo kunye nabanye. Ukuveliswa kwethu okutsha okunezinto ezahlukeneyo zinokudibana nabayili ukusombulula naziphi na izisombululo ezizodwa zokutolika intsingiselo enzulu yolwakhiwo kunye nokubanika amathuba angenasiphelo kuyilo kunye nezinto ezintsha. Yimodeli yethu yophuhliso lweshishini ukuphumeza ngokungqongqo ukujolisa kokusebenza ngokukuko, okujolise kumgangatho kunye nokulawulwa kwabantu. Njengenxalenye yoluntu, sazi kakuhle ngokusingqongileyo isikhundla sethu kunye noxanduva lwethu.
Sisebenza ngokuhambelana nolu xanduva kwaye siqinisekisa ukuba sabelana ngexabiso esilenzayo, ngolungelelwano olufanelekileyo, kunye nabathengi bethu, abasebenzi kunye nabo bonke abanini bethu. Kule mihla sisebenza nzima ukwenza ixabiso elomeleleyo kunye namaqabane ethu aseTshayina athembekileyo nanamava. Iqela elinobuqili linoluhlu lweemveliso eziphambili ze-100 ngokuhlaziywa okuqhubekayo. Nceda ungathandabuzi ukunxibelelana nathi ukuba ungathanda ukwazi ngakumbi ngeemveliso zethu, iiparameter zobuchwephesha ezineenkcukacha kunye nenkonzo yethu. Iinjineli zethu ezinamava zentengiso zikwinkonzo yakho nangaliphi na ixesha.
Sineemfuno ezizodwa kwinkqubo yokwakha neyokomeleza inkqubo, kunye nepeyinti engaqhelekanga.
Sinceda abaThengi baphumelele
Intsebenziswano yiya ngaphaya kweSpace
Inkampani enobulumko kunye namaqabane e-China babhale isahluko sentsebenziswano esivela ekusebenzeni komatshini kwiindawo ezithile ukubandakanyeka ngokupheleleyo ekuveliseni inkqubo ye-bolt yokwakha yoluntu ye-Prudential kunye nejelo elingeneyo. Namhlanje, ngaphezulu kweeprojekthi ezingama-3,000 zokugqibela eziphezulu zisebenzisa izinto kwaye
iindibano eziveliswa eTshayina. Kwixesha elizayo, i-Prudential iya kuqhubeka nokusebenza nomzi mveliso ojolise kumgangatho e-China ukuze kusekwe inkqubo ekhuselekileyo kunye neyona ndlela ifanelekileyo yokusebenza kwe-bolt yokwakha kunye ne-Cast-in anchor channel. Ngamana le ntsebenziswano ingadlula ngaphaya kwexesha kunye nendawo kwaye ijongane nekamva kunye nokuzinikela kwethu okungapheliyo.
Imeko yethu yangoku
I-UK Prudential Industry Co, Ltd. yinkampani yaseBritani eyaziwayo kwihlabathi liphela. I-UK Prudential Industry Co, Ltd. unikeze iimveliso kunye nenkonzo kumazwe angaphezu kwama-40 emhlabeni. Isebenza kwaye ilawula ishishini kumazwe angaphezu kwe-15, isakha iifektri ezisebenzisanayo kumazwe ayi-6 kwaye ineelabhoratri kumazwe ama-4.
Inkampani enobulumko ibonelela iinjineli kwihlabathi liphela ngenkonzo ebanzi yobugcisa. Ukukunceda ukhethe iziqwenga ezifanelekileyo zokubopha, inkampani yethu iya kusebenzisana ngokusondeleyo neqela lakho lobunjineli elihlonitshwayo kwinqanaba lokuqala loyilo lweprojekthi. Ngokuthatha inxaxheba, uPrudential unokuhlala ekunceda ukhethe iziqwenga ezikhuselekileyo nezinoqoqosho. Iqela lezobunjineli elinobuqili liya kukunceda ngokunyaniseka okukhulu kunye nehlombe nokuba kuse-ofisini okanye kwindawo yeprojekthi. Ubulumko buya kunika inkxaso epheleleyo kuyo yonke iprojekthi yakho.
IQela loLungiselelo lweHlabathi
Inkonzo yeQela loPhuculo lwePrudential yokuqinisekisa ukuba iimveliso zakho ziya kusiwa kwindawo yokwakha ngexesha. Sijonge ukukunceda ufeze imisebenzi ngokocwangciso lwakho ngaphandle kokulibazisa. Nokuba imeko kaxakeka iyenzeka, siya kuzithumela kwangoko iimveliso zethu
Indawo ekufutshane yengingqi, yengingqi, okanye yokugcina umhlaba. Ngeli xesha, asizukugcina naziphi na iinzame zokuthintela ukuthunyelwa okubizayo okanye iifizi zenqwelo moya.
Ngaphandle kweemveliso zethu ezisemgangathweni, sikwabonelela ngenkonzo yokwenziwa kwemveliso ukuze sikunikeze iimveliso ezichaziweyo ezahlukeneyo.
Nceda uzive ukhululekile ukunxibelelana nommeli wasekhaya ngobulumko, ukuba unaso nasiphi na isidingo.
Ukhuselo lweNdalo esingqongileyo
Ngelixa kuququzelelwa ukwenziwa kwezinto ezintsha, uPrudential ukhuthaza ngenkuthalo abasebenzi ukuba bathathe inxaxheba kwisicwangciso sokukhusela okusingqongileyo, esibizwa ngokuba "ziProjekthi zoThintelo loNgcoliseko"